Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed oo sheegay inuu tagayo jiida hore ee dagaalka – WARSOOR
ITOOBIYA – (WARSOOR) – Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu shaaciyay inuu hadda wixii ka dambeeya uu tagayo jiida hore ee dagaalka kaa oo u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo xoogagga TPLF. Ra’iisul wasaare Abiy ayaa ah abbaanduulaha guud ee ciidamada difaaca Qaranka dalka Itoobiya, wuxuuna fariintaan si gaar ah ugu muujinayay inuu doonayo inuu hoggaamiyo ciidamada dagaalka ku jira.
Sidoo kale Safaaradda dalka Turkiga ee magaalada Adis Ababa ayaa u sheegtay muwaadiniinta Turkiga ee hadda ku sugan Itoobiya inay isaga baxaan dalkaas sababo la xiriira isku dhacyada sii kordhaya ee u dhaxeeya ciidamada milatariga iyo fallaagada TPLF.
2-dii Bishaan Nufeember ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo dalka lagu soo rogay iyadoo ay ugu wacan tahay dagaallada ka socda qaybo ka mid ah Itoobiya.
Jaaliyadaha Itoobiyaanka ah ee ku nool qaar ka mid ah wadamada dibadda ayaa sameyay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan dowladda iyaga oo ugu baaqay dalalka caalamka inay dowladda Itoobiya ku gacan siiyaan dagaalka ay kula jirto kooxda TPLF.
Dalalka isu soo baxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Canada,hase-yeeshee telefishinka ku hadla afka dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay inay bannaanbaxayada lagu tagaeerayay dowladda ay ka dhaceen 27 magaalo oo ku kala yaalla dalalka caalamka.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka JSL oo Kulan La Yeeshatay Daneeyayaasha Gadiid Xamuulka